ECanada, njengoba wonke amazwe emhlabeni ngamaholide yabo, okuyinto ezibhekwa yi yombuso kanye neyesifundazwe izindawo ngabanye. Ezinye zazo yilezi "red" izinsuku olusemthethweni futhi ekhalendeni, lapho bonke abanye. Izakhamuzi uthanda ukuba amaholide laseCanada kazwelonke siwela phezu kwanoma iyiphi ngempelasonto, futhi uthole mini-iholidi noma eside isonto endy. Ezinye zazo iphathiswe ngosuku oluthile, njenge-New Year - 1 Januwari, futhi ezinye zazo elintantayo, ngokuthi i-Easter noma Good Friday, ziyefana eRussia.
Lo mkhosi eCanada akuyona njengoba izintandokazi, kokubili eRussia futhi ize kancane, ngoba ugijima ngemuva Christmas, okuyinto ibhalwe kahle phansi futhi walinda. Ngokuvamile, ahlangane uNyaka Omusha emgwaqweni nabangane noma izihlobo, ethunyelwe isikwele edolobheni lapho ekhonsathini senzeka. It iphela Chime, futhi ingxenye labantu uya ekhaya, futhi abanye bangase babe ukuya rink, lapho umculo bukhoma kungaba isikhathi esihle.
Usuku le-Canada iholide
The main nsuku zonke kazwelonke siphela Julayi 1, ngoba lokho lapho isenzo eBritish eNyakatho neMelika esayinwe 1867, lapho izifundazwe ezintathu united esimweni esisodwa futhi engimbumbile Canada.
UMbusi Charlz Stenli Monck wabiza bonke abahlali ukugubha lolu suku, kodwa kwakungeyona olusemthethweni kuze 1917. Ngaphambi 1879 iholide egqoka elinye igama - Dominion Day, njengoba kwakuke ngokuthi Canada.
Konke kwashintsha ngemva kweMpi Yezwe II, lapho uhulumeni ihlelwe emcimbini okhethekile, okuyinto kwasho emcimbini Trooping, bese kunamakhonsathi kanye iziqhumane.
Okthoba 27, 1982 leli holidi iqanjwe kabusha futhi waziwa ngokuthi Usuku le-Canada. Julayi 1 unyaka ngamunye imisebenzi efana yamathanga, imikhosi, carnivals, amakhonsathi umculo iziqhumane. Amaholide namasiko Canada sihlonishwe sonke isibalo sabantu, ikakhulukazi okwamanje onesizotha lapho isikwele eyinhloko-dolobha kukhona basayine isifungo yisakhamuzi umhlali entsha. Okunye ezindinganisweni ezifanayo abekho, isifundazwe ngasinye ucabange ngokusebenzisa uhlelo lwakhe.
iholide Civil eCanada
Lena iholide ezithakazelisayo, okuyinto akanayo uhlobo oluthile zomlando, olwalusikisela wamavukelambuso. It yadalwa emuva ekhulwini le-19, kuphela engasebenzi ngalolo suku.
Ngisho nangaleso sikhathi, wonke yoMbuso WaseBrithani nawo House of Commons esigunyazwe usuku ekuqaleni kuka-August njengoba iholidi ebhange, futhi umnikazi owaziwa, isazi sezombusazwe kanye isazi semivubukulo futhi isazi sezinto eziphilayo Dzhon Lyubbok Kunconywa ukuba ucabangele le usuku "esikahle nesinobulungiswa".
Namuhla, njalo ngonyaka ngoMsombuluko wokuqala ngo-August kubhekwa iholidi civil, nakuba ezahlukene egameni kuncike sifundazwe.
Christmas Eve futhi Christmas
ECanada, eziningi zamaKatolika, elingafunwa imikhosi engcwele ezibalulekile. Ngobusuku obandulela uKhisimusi, Christmas Eve, wonke umuntu ilungiselela iholide main, lapho iisus hristos wazalwa. Emgwaqweni zonke ehlotshiswe izibani ezimibalabala, ukulungiselela izipho bathenge imikhiqizo eyodla ngosuku olulandelayo. Edolobheni Labrador futhi Newfoundland, ukuthengisa inhlanzi, futhi imali wakhipha abampofu.
NgoKhisimusi - ke ingenye esemqoka kanye namaholide bhá. Phela, izwe lihlala abantu abangaphezu kuka-77% amaKristu, 43% babo bengewona amaKatolika. Ekhaya, ezakhiweni main nezitolo setha isihlahla sikaKhisimusi, ukuhlobisa amafasitela ezitolo futhi umnyango endlini nge Christmas amagoda ezimbali. Lena ukugubha, lapho imikhaya zibuthanela etafuleni, okuyinto ungakwazi ukubona wonke ngonyaka, kodwa kulo lonke usuku ndawonye.
Good Friday, Easter, Easter ngoMsombuluko
Like Christmas - iholide engcwele, futhi Good Friday - isikhathi kubaluleke kakhulu ukuze abantu baseCanada. Lolu usuku sethunzi lokufa, okuyinto incike ikhalenda isonto, futhi ngokusemthethweni kubhekwe iholide lazo zonke Canada, njengoba uhulumeni ubona kubalulekile ukuvumela namaProthestani ukugxila usizi likaJesu.
Ngokwesiko, amaKatolika ukuhamba izingubo ezimnyama, nishaye amakhandlela, uvale esibukweni, hhayi ukuphazanyiswa kwanoma yiliphi ibhizinisi nemisebenzi.
I lephasika uyeza Easter holiday, okuyinto uzilungiselele ngisho abantu abangakholwa, ecabanga ngokusebenzisa indlela itafula futhi ukuhlobisa indlu. It kubhekwa uphawu Easter Bunny, okuyinto kuveza ngesimo kwesitsha, futhi wahambisa amaqanda kanye amaswidi. Lokhu kazwelonke ngeholide enhle eCanada, lapho abantu bengalisebenzisi vele uye vakashela nomunye nakulo ibandla, kodwa futhi iya ku Fairs, izimakethe, lapho ukuthengisa awukudla okumnandi. Ngalolu suku, ezama ukuletha injabulo ekhethekile izingane ukuhlobisa indlu ndawonye, izipho, ukuya esontweni futhi udla amaswidi. Nokho, e-Canada, kukhona ezimbili sengqondo leli holide - ezinye izinhlamvu sokuvuna ezifana bunny futhi amaqanda amibalabala, kuyilapho abanye - inhlansi nomlilo.
Usuku emva Easter, isb. E. NgoMsombuluko, ngokusemthethweni ohlwini usuku lapho abantu abusise ukudla futhi angcwelise indlu yakhe unyaka wonke. Kodwa empeleni lena akuyona iholide lomphakathi kuwukuchofoza izikhungo ezimbalwa, bonke abanye ukuya emsebenzini.
Lapho Canada baqala ukuhlala eFrench nabo bafika Ioanna Krestitelya iholidi yenkolo, oqala Juni 23 futhi uphela ngosuku olulandelayo. Namuhla, lolu usuku isiko waseCanada okhuluma isiFulentshi. Quebec - lokhu ingenye enkulu amadolobha "French" ngaphandle France. French yilona ulimi lomdabu ngoba 80% wesibalo sabantu.
Usuku Ioanna Krestitelya sika - usuku lokukhala Patriots, nesuka ngo-1834, lapho omunye kulaba bamemezeli iphephandaba, Lyudzher Duvernay, kubhekwe ukuthi iholidi kazwelonke French iyadingeka futhi, okuyinto namanje kugujwa ngendlela enkulu esifundazweni.
Meyi 24, 1819, koroleva Viktoriya wazalwa, futhi ngosuku kuye kwaba isikhathi eside, leli holidi eyinhloko WaseBrithani. Kodwa kwathatha iminyaka eminingi ngaphambi kokuba wawubhekwa njengophawu kazwelonke futhi esemthethweni, futhi kusukela ngo-1901 kuphela, it is lugujwe kuzona zonke izingxenye ngoMsombuluko ngaphambi komhla ka Meyi 25th. Lolu wusuku lapho khumbula Queen Victoria, oye wenza kahle kakhulu ngoba Canada, futhi njengoba kuwuphawu lokuhlonipha, abaseCanada ukukubiza ngokuthi igama lalowo muzi futhi emgwaqweni, futhi portrait wakhe phezu eyiphepha 20 zamaRandi Canadian. Nokho, ezinye imikhosi omangalisayo ayakhumuka, ngosuku nje ngokukhiphayo ezengeziwe.
amaholide UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki: Tulip Festival, International Earth Day, Boxing Day
Yimaphi amaholide e-Canada ezithakazelisayo futhi engavamile, kanye owaziwa yonke indawo futhi ukuqoqa inani elikhulu labantu?
Tulip Festival, ebanjwa e Ottawa e ngesonto lokuqala Meyi. Esinye sezenzakalo best of the entwasahlobo, lapho inhloko-dolobha ungcwatshwa izimbali, okuyinto basuke amazwe kusuka Holland.
Indaba Canada e ekugubheni yokuthi ezithakazelisayo ukuthi phakathi neMpi Yezwe II, lapho eyayifihliwe asebukhosini yeNetherlands, nangaleso sikhathi ephethwe wayeyozalelwaphi koroleva Margriet. Ukuze uthole isiqinisekiso esemthethweni lokuzalwa YeNdlovukazi, ukuthi lokhu kwakudingekile kuleli zwe. UHulumeni Canada waya iqhinga,
kanye ekamelweni lapho umntwana ezalwa, waqaphela ensimini yeNetherlands.
Namuhla Tulip festival - sibonga kulo lonke leli zwe-Dutch, ngubani wabanakekela ngesikhathi esisodwa. Umkhosi iqala Tulips Ball, lapho ungakwazi sampula izitsha kazwelonke kanye iziphuzo, futhi unyaka ngamunye phakathi izimbali zawo ziwukudla iholide ezingaphezu kuka imibala 5 million.
Enye celebration akunakubangelwa ngamaholide engavamile-Canada - Earth Day, ebanjwa ku 22 April. Cishe wonke umfundi uthatha esebenzayo ingxenye, ukukhumbuza wonke umuntu ukuthi iplanethi esiphila kuzo, nokuthi kumele avikelwe. Ayikho Canada nesimangaliso, ngokuvumelana UNESCO, ingenye amazwe evumayo kakhulu ukuziphilisa, futhi uhulumeni kunzima izimboni elawulwa ukukhululwa kwezinto eziyingozi futhi yokuhlanza amadivayisi ezifakiwe.
izipho iholide akuzona esingaphansi yokuqala ngaphandle Tulip Festival, futhi yikhona okuthatha indawo zingama-26 kuDisemba emva Christmas. Okokuqala kwaba umkhosi St kukaStefanu, owawungumnyaka umfel 'ukholo wokuqala ongumKristu. Yingaleso sikhathi lapho waqala ukuvuna izipho amabhokisi nge imali eyayihloselwe abampofu.
Ngo-June unyaka ngamunye ibilokhu iminyaka engu-30, is the holiday ebaluleke kakhulu jazz, okwakubekelwa ezisohlwini Guinness Book of Records. Montreal edonsela abaculi ethandwa futhi izigidi ababukeli futhi ugu lweNyakatho Lawrence kukhona amakhonsathi, lapho ubusuku kuze kuse ukudlala izitayela ezahlukene umculo, ezisukela zakudala jazz uzotshala rock indie. ku Akukhona nje ogwini kodwa futhi ukusebenza bukhoma umculo.
amaholide yokushisekela izwe
Njengoba kushiwo ngaphambili, iholidi wezwe lonke owawungo-Quebec ngoJuni 24. Ngaphezu kwalokho, kukhona nezinye emikhosini emikhulu e-Canada, okuyinto ezibhekwa yokushisekela izwe.
Ngo-1995, kusho uNdunankulu Jean Chrétien yamemezela Februwari 15 ngoSuku Maka. Ngokuthakazelisayo, ifulege kuphela 1965 ngesimo iqabunga Maple, labonakala okokuqala ephakanyiswe. Ngaphambili, kwakucatshangwa isithombe zesiphambano St George, lapho indawo ephethwe yi-British. Ngaphezu kwalokho ifulegi washintsha lapho ubunikazi wadlulela French. Njengoba isithombe esetshenziswa banner Orleans lwamakhosi - ngeminduze.
NgoMsombuluko wesithathu Februwari lugujwa elinye iholide yombango Canada - Usuku Amagugu lithole ukuqashelwa emphakathini. Ngaphansi ifa ponimetsya iqoqo izinsiza ngokomzimba kanye namasiko. Lolu suku ekhalendeni ikhumbuza bonke abantu abahlala yezwe ukuthi badinga ukwazi umlando uyaziqhenya ukuthi uhlala kuphi.
Inani labantu base-Canada - ekubumbaneni bezizwe ezimbili, isiFulentshi futhi isiNgisi, ngakho ngokusemthethweni yokutholwa emaculweni ezimbili, ngosuku lapho lugujwa ngomhla ka-27 Juni. Ekuqaleni amaNgisi, abaseCanada wahlabelela "O, Nkulunkulu Londoloza Queen" ngalesosikhathi qamba amaculo amasha "Maple Leaf phakade," French baseCanada baye banikeza omunye ingoma - "O Canada", iye yatha-. kusukela ngo-1980 kuphela ithole isimo ezisemthethweni iculo lesizwe.
Kunabantu abaningi ngubani ngihloniphe namaholide kazwelonke ngenkolo eCanada, kodwa kunezinye izinsuku ezibalulekile, ezixhunywe nomkhaya.
USuku Lomama - umkhosi ebaluleke kakhulu Canada, lapho bonke komama babo ngenxa yomusa walo, uthando nomusa. Ngisho ngo-1914, i-American Anna Jarvis athonya umengameli ukudala lo mkhosi ukubonga umama hhayi kuphela yami, owakhulisa izingane 11, kodwa bonke omama ngomsebenzi wabo. Ngemva nje kancane kwalokho, leli holide wajoyina ophathelene nabantu baseCanada.
NgeSonto lesithathu NgoJuni lugujwa uSuku Lobaba - njengoba nokudunyiswa ubuyise kanye nomthwalo wemfanelo okungenamkhawulo kulo mkhaya. Kuyinto yiholidi besilisa uma izingane omdala abazali bazo, uhlele sokudla uhamba ndawonye.
Kukhona umkhosi onjalo, njengoba usuku ugogo nomkhulu, lapho abadala ohlonishwayo. Ngokwesiko, umcimbi ubhekwa epikinikini noma izoso, lapho ukunakwa ikhokhelwa lungene babazali bakho.
Kuyini entwasahlobo? Sekuyisikhathi sokuba izinto ezintsha kanye ekuqaleni imvuselelo imizwa nemizwelo!
Brittany Robertson - eyaziwa actress American
Yeka indlela okuyingozi iphimbo zangaphandle?